Xuska maalinta Naafada Adduunka oo lagu qabtay Muqdisho (DAAWO MUUQAAL) – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
Munaasabad lagu xusayay maalinta Naafada Adduunka uuna ka qeyb galay Wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho
Munaasabadda ayaa mas’uuliyiintii ka hadashay waxaa ay diirada ku saareen caqabadaha dadka naafada haysta iyo sidii ay u heli lahaayeen Daryeel, isla markaana ay u helaan fursado shaqo.
Guddoomiyaha Golaha Naafada Qaranka Soomaaliyeed Cali Cabdullaahi Salaad oo ka hadlay munaasabada ayaa waxa uu dowladda ka codsaday in Naafada Soomaaliyeed kor loo qaado, lana ogaado in ay qayb muhiim ah ka yihiin bulshada.
Agaasimaha Warbaahinta Qaranka mudane Cabdiraxmaan Yuusuf Sheekh Al Cadaala oo ka mid ahaa Mas’uuliyiinta ka qayb gashay Munaasabadaan lagu xusayay Maalinta Naafada Adduunka ayaa waxaa uu ka sheekeyay Barnaamij uu Telefishinka Qaranku ka sameeyay dhibaatooyinka haysta naafada Soomaaliyeed iyo waxyaabihii lagu ogaaday sameynta Barnaamijkaas.
Gudoomiyaha Xisbiga Cadaalada iyo arimaha Bulshada Maxamuud Axmed Nuur “Tarsan” oo ka hadlay munaasabadaan ayaa sheegay in naafada ay tahay awood aan la dafiri Karin, loona baahan yahay in daryeel ay helaan si ay uga qayb qaataan dhismaha Dalka.
Ugu dambeyntii Wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee XukuumadDa Soomaaliya mudane Luqmaan Xaaji Ismaaciil oo xafladda soo xiray ayaa sheegay in Wasaaraddu muhiimad siineyso Waaxda Naafada u qaabilsan Wasaaradda, waxaana uu tilmaamay in sharciga naafada loo gudbin doono golaha Wasiirada.